कम्युनिस्टका अबगुन - Tesro Ankha
२०५१ तिर काठमाडौंमा माधवकुमार नेपालले जुन हाउभाउ र शैलीमा भाषण गर्नुभएको थियो, मुस्ताङको कार्यकर्ताले पनि ठीक त्यही ढंगले, त्यस्तै शैलीको नक्कल गरेर भाषण गरेको सुनेर म दंग पर्थे । बाँकी पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्यको शब्दमा :
अरूले सायद आफ्नो अनुभव र भोगाइका आधारमा कम्युनिस्टको त्यस्तो विम्ब प्रस्तुत गर्थे । तर, मैले भने त्यस्ता कम्युनिस्टको संगत गर्न पाइनँ । मैले त्यस्तो रूपका कम्युनिस्ट देख्न पनि पाइनँ । विद्यार्थीकालमा मैले संगत गरेका साथीहरूबीच कांग्रेस र कम्युनिस्टको कुनै विभेद थिएन । कलेज पढ्ने बेलामा मात्रै कम्युनिस्ट साथीहरूसँग संगत भयो । ०२५÷२६ तिर म संस्कृत छात्रावासमा बस्थें । त्यतिबेला स्वं घनश्याम शर्मा पौड्याल मेरा मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो । तर, माथि वर्णन गरिएजस्तो ‘मौलिक’ कम्युनिस्ट उहाँ हुनुहुन्थेन । लुगा पनि नराम्रो लगाउनुहुन्थेन, खानपिनमा पनि हामीभन्दा भिन्न हुनुहुन्थेन । त्यतिबेलाकै साथीहरूमा पोखराका भवानीप्रसाद पाण्डे, माओवादी नेता सुरेश वाग्ले ‘वासु’ पनि छात्रावासका मेरा कम्युनिस्ट साथी हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरू र हामीबीच खानपिन र लवाइखवाइमा खासै भिन्नता थिएन ।
भनिन्छ, ‘कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टको जीवनशैली फरक हुन्छ ।’ कहिलेकाहीं म पनि यस्ता विषयमा सोच्ने गर्छु । देख्छु, अहिले त कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट व्यक्तिका बीचमा खासै फरक छैन ।
राजनीतिक सहकार्यका क्रममा कम्युनिस्टहरूसँगको मेरो निरन्तरको घुलमिल, छलफल र भेटघाटका कारण पनि मलाई कम्युनिस्टहरू खासै फरक नलागेका होलान् । पहिले आफूले नदेखे/नभोगे पनि कम्युनिस्ट शब्द सुन्नासाथ मानसमा जस्तो विम्ब आउँथ्यो, अहिले त्यस्तो खास विम्ब वा चित्र पनि आउँदैन । मान्छे आखिर मान्छे नै हो, त्यसका आफ्नै रुचि, स्वभाव र प्रवृत्तिले नै जीवनशैली निर्देशित हुन्छ । खास संस्था वा संगठनको आबद्धता र निश्चित दर्शनको प्रभावले बाँच्ने शैलीमा केही न केही फरक त ल्याउँछ नै । तर, अहिले कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टबीच त्यति ठूलो भिन्नता छैन । उस्तै सामाजिक र आर्थिक अवस्था भएको समाजमा रहेका व्यक्तिहरू जुन पार्टीमा रहे पनि जीवन पद्धतिमा साझापन हुन्छ । अर्कोतिर कम्युनिस्टहरूको पनि समाजअनुकूल घुलमिलीकरण भइसकेको छ ।
मलाई मन नपर्ने कम्युनिस्ट शैली
१. कम्युनिस्टहरू प्रायः पृष्ठभूमि खोजेर धेरै सन्दर्भ जोडेर लामो–लामो बोल्छन् । धेरै समय लिने र लम्बेतान बोल्ने यस्तो शैली मलाई मन पर्दैन ।
२. कम्युनिस्टको केन्द्रीय नेतादेखि तल्लोतहका कार्यकर्ताहरूसम्मको बोल्ने तरिका र प्रस्तुतिको शैली उस्तै हुन्छ । उनीहरूको वक्तृत्वकलामा मौलिकताको न्यूनता हुन्छ । फरक–फरक मान्छेको पनि एउटै ढाँचा र ढर्राको प्रस्तुति मलाई मन पर्दैन ।
३. कम्युनिस्ट भनेको सरल मान्छे हो भन्छन् । सिद्धान्तमा सादा जीवनको वकालत गर्छन् । तर, व्यवहारमा सुविधाभोगी हुनुपर्ने हुँदा उनीहरूको देखाउने व्यवहार एउटा र नदेखाउने व्यवहार अर्को हुन्छ । यस्तो दुईखाले चरित्र पनि मलाई मन पर्दैन ।
४. पहिले आफूलाई सुधारेर अरूमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हो । तर, कम्युनिस्टहरू अरूका जुन काममा प्रश्न उठाउँछन्, त्यही काम आफूहरूले निर्धक्क गरेका हुन्छन् । यो पाखण्डजस्तो प्रवृत्ति पनि मलाई मन पर्दैन ।
२०७४ असार ९ २३:१३